UNENE LEAKES UPHUMA KWABOMAMA BOKWENENE BASEATLANTA - IINDABA
UNene Leakes Uphuma Kwabomama Bokwenene BaseAtlanta
UNene Leakes uxhoma ipesika yakhe.
Oomama bokwenyani baseAtlanta ilungu eliqinileyo bazise ukuba uphuma kwingqokelela yokwenene yeBravo emva kwamaxesha ali-11.
U-Leakes uthe uzimisele ukuba aphumelele kulo mdlalo emva kokudibana kunye nokudibana nabantu.
Mamela ngokusondeleyo, ndifumene into enye yokwazisa! uchaze phezulu kwevidiyo, ngaphambi kokubulela abalandeli ngoncedo lwakhe kuyo yonke le ndlela.
Kubekho iimvakalelo ezininzi macala. Kube nzima kwaye ndenze isigqibo esinzima, esomeleleyo sokungabi yinxalenye yooMama boMama bokwenyani beXesha le-13, utshilo.
Kwakungekho ukuzimisela okulula kum. Kwakunzima, inyani yeTV yaqhubeka.
mde kangakanani ybn cordae
Ucacise ukongeza ukuba uluhlu lomboniso lwaluyimfuneko.
Ndilunge kakhulu kangangokuba ndingatsho ukuba bendikade ndiyinxalenye yesitayile esivule umnyango we-Ensemble ye-Black ityhila ukunyuka kwaye sibe yinxalenye yento sonke ngoku esiyithandayo kakhulu: ubunyani beTV.
Ndinqwenela ukubulela wonke umntu othathele ingqalelo njengam kuyo yonke le minyaka. … Ndinqwenela ukubulela uBravo ngazo zonke iinkumbulo. … Enkosi ngokuqinileyo kuzo zonke iinkumbulo, utshilo, ebonisa ukuba ukulungele ukuqhuba.
UJennifer lopez umkhweli wobuhle
UAndy Cohen uxelile ngokumbiza ngokuba ngumqondiso wesimbo.
Ungumatshini we-gif kunye ne-catchphrase, 'uCohen, ekwabelwana ngaye.
Kwiminyaka eli-11 ye #WWHL, uNene ebesoloko elundwendwe lwethu rhoqo, kwaye uhlala eliliQHELEKILEYO.
UNene wandithiya igama elithi Buttercup kusuku lokuqala esadibana ngalo, kwaye nangona kunjalo unditsalela umnxeba kwangoko.
Ngalo lonke ixesha lokubaleka kwakhe, unamaxesha onke enenkxalabo enkulu kunye nokuqhuba ukhathalelo lwempumelelo kunye nentlalontle ye- # RHOA, utshilo.
umfana wentliziyo waphosa
Ndizokungayihoyi uNene kumdlalo, nangona kunjalo ndiyathemba ukuba siza kusebenza ngokudibeneyo kanye ngokukhawuleza kwaye, angabhala ngaphambili kunokusayina njengeGcuwa.
Yayingeyonto kodwa ke umvuzo ovela kwisithethi seBravo kukhuphelo kumaphephandaba.
Sifuna uNene konke okusemandleni akhe kwikamva lakhe kwaye simbulele ngokwabelana ngohambo lwakhe ngaphezulu kweshumi leminyaka nabalandeli boMama basekhaya baseAtlanta, bacebisa indawo.
Usebenze ngokuba ukuqala kwaye kungaphoswa, kwaye kwixesha elizayo uya kuyigcina ipesika kwakhona.
Eli ayiloxesha lokuqala leLeakes liphume kwingqokelela, esele liphumile kwiXesha le-9, nangona kunjalo libuyisa unyaka olandelayo njengomfazi opheleleyo wendlu.
Nangona kunjalo, bekukho iinyanga zokuqikelela malunga nokuba iLeakes ingaba yinxalenye yexesha leshumi elinesithathu.
Zithini izimvo zakho kolu lwazi?
xa ubiza ixesha lentliziyo 9 isiqendu 1
Khumbula ukuba uya kuba nakho ukubukela Oomama Bokwenene BaseAtlanta kwi-intanethi ngokufanelekileyo apha ngendlela yeFanatic Fanatic.
UPaul Dailly nguMhleli oDibeneyo weFanatic Fanatic. Mlandele phambili Twitter .
Izigaba: Amazon-Prime Iindaba Hollywood
angela babicz dr phil
jamar champ net kufanelekile
Elly tran ine-instagram
Ubudala buka-petri hawkins-byrd
Rick kunye nexesha lokudaka 5 hbo max